Madaxweyne Shariif oo Hal Kilo mitir socod ku dhexmaray Magaalada Garoowe. – SBC
Madaxweyne Shariif oo Hal Kilo mitir socod ku dhexmaray Magaalada Garoowe.
Posted by editor on August 28, 2011 Comments
Madaxweynaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray magaalada Garoowe xarunta Dowlada Puntland waxa uu kormeero ku kala bixiyay qeybo farabadan oo ay ka mid yihiin goobaha ay ku jiraan Barakacayaasha, iyo goobo kale.
Waxa uu madaxweynuhu halkaasi uga dhageystay warbixino horjoogayaasha dadka soo barakacay ee jiray xeryaha uu booqday, isagoona indhahiisa ku arkay sida ay xaaladoodu tahay.
Wafdiga Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Shariif Sh Axmed, Raiisul wasaara xukuumada iyo weliba Madaxda sare ee Puntland oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa ayaa sidoo kale socod ku maray ku dhowaad hal Kiilo mitir gudaha Bartamaha magaalada Garoowe, iyagoo salaam siinaya dadweynihii wadada safnaa ee soo dhaweeyay Madaxweynaha.
Waxaa sidoo kale Madaxweyne Shariif iyo qeybaha kala duwan ee masuuliyiintaasi ay kormeer ku kala bixiyeen wasaaradaha Dowlada Puntland sida wasaarada Waxbarashada, Haweenka iyo Arimaha Qoyska, iyo weliba Isbitalka guud ee magaalada Garoowe.
Kormeerka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay goobahaasi ayaa dhamaantood waxa uu ugu kuurgalay xaaladaha ka jira iyo sida ay u socdaan shaqooyinkooda.
Ka dib kormeerka madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku mareen goobahaasi ayaa waxaa ay ugu dambeyn gaareen aqalka madaxtooyada Puntland ee Garoowe halkaas oo ay kula hadlayaan saxaafada isagoo madaxweynuhu ugaga warbixiyay safarkiisa iyo weliba soo dhaweynta loo sameeyay.
Hadaba madaxweynaha qudbadiisa iyo sawiro aan ka soo qaadnayba Daqiiqado ka dib kala soco SBC Online.